Barafkii barafka ee Bursa ayaa hakiyay duulimaadyadii Bursaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGaroowe oo goos goos ah ayaa joojiyay duullimaadyadii Bursaray
08 / 01 / 2013 16 Bursa, tareenka, GUUD, Metro
2 duullimaadyada Bursa, duullimaadyada BursaRay sababtoo ah barafka socda ayaa xannibay maalmo. Awoodda saldhigyada tareenka dhulka hoostiisa ku jiray ayaa caadi ku soo noqday iyada oo meesha laga saaray guuldarradii.
BursaRay cilad koronto awgeed korantadii galbeedka ee adeegga metro ayaa la hakiyay. Khadka Jaamacada Uludag wuxuu awooday inuu sameeyo duullimaad hal khad ah. Burulaş, oo ah shirkadda gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa, ayaa ku dhawaaqday in duullimaadyada ay caadi ku soo noqdeen iyada oo la damiyey koronto la'aan.
Iskuulada ku yaal Bursa maalin maalmaha ciida awgeed barafka, heerkulka hawada waxaa lagu cabiray heer laga jaray 1 digrii.
Gaaritaanka Gacan-ku-saarka ee Sivas Tababaraha Tababarka.
Barafka ayaa ku dhufanaya duulimaadyada YHT
Saacadaha subaxda, saameynta barafka ayaa sii kordhisay saameynta ay ku leedahay duullimaadka matoorka.
Booqashada Bursa waxaa qoray Bursa Wagons (Rotterdam)
Waddooyinka Deriska ah oo la furay Baraf aad u culus oo ku yaalla Bursa
Manisa 2012, Railroad waxay kala tageen Barbaros 1970 Live